Izinyathelo Ezi-10 Zokwenza Izinhlolovo Eziphumelelayo Ze-Inthanethi | Martech Zone
Izinyathelo Ezi-10 Zokwenza Izinhlolovo Eziphumelelayo Ze-Inthanethi
NgoLwesibili, Septhemba 27, 2011 NgoLwesine, Septhemba 19, 2013
Amathuluzi wokuhlola aku-inthanethi okufana neZoomerang kumnandi ekuqoqeni nasekuhlaziyeni idatha ngempumelelo nangempumelelo. Inhlolovo ehlanganiswe kahle eku-inthanethi ikunikeza ngolwazi olusebenzayo, olucacile ngezinqumo zakho zebhizinisi. Ukuchitha isikhathi esidingekayo ngaphambili nokwakha inhlolovo enkulu eku-inthanethi kuzokusiza ukufezekisa amazinga okuphendula aphezulu, idatha yekhwalithi ephezulu futhi kuzoba lula kakhulu kubaphenduli bakho ukuthi bayigcwalise.
Nazi izinyathelo eziyi-10 zokukusiza dala ucwaningo olusebenzayo, khulisa izinga lokuphendula locwaningo lwakho, Futhi thuthukisa ikhwalithi isiyonke yemininingwane oyiqoqayo.
Chaza ngokusobala inhloso yocwaningo lwakho - Ucwaningo oluhle lunezinhloso ezigxile eziqondakala kalula. Chitha isikhathi phambili ukukhomba izinhloso zakho. Ukuhlela kusengaphambili kusiza ukuqinisekisa ukuthi inhlolovo ibuza imibuzo efanele ukuhlangabezana nenhloso futhi ikhiqize idatha ewusizo.
Gcina ucwaningo lufushane futhi lugxile - Okufushane nokugxile kusiza kokubili ikhwalithi nobungako bezimpendulo. Ngokuvamile kungcono ukugxila enhlosweni eyodwa kunokuzama ukwakha inhlolovo eyinhloko ehlanganisa izinhloso eziningi. Ucwaningo lweZoomerang (kanye noGallop nabanye) lukhombisile ukuthi ucwaningo kufanele luthathe imizuzu emi-5 noma ngaphansi ukuphothula. Imizuzu engu-6 - 10 yamukelekile kepha sibona amazinga okushiya abalulekile avela ngemuva kwemizuzu eyi-11.
Gcina imibuzo ilula - Qiniseka ukuthi imibuzo yakho ifinyelela eqophelweni futhi uvikele ukusetshenziswa kwejagoni, isitsotsi noma ama-akhronimi.
Sebenzisa imibuzo evaliwe lapho kunokwenzeka - Imibuzo evaliwe yocwaningo inika abaphenduli izinqumo ezithile (isib. Yebo noma Cha), okwenza kube lula ukuhlaziya imiphumela. Imibuzo evaliwe ingathatha uhlobo lweyebo / cha, ukukhetha okuningi noma isilinganiso sesilinganiso.
Gcina imibuzo yokukala isilinganiso ngokungaguquguquki ngenhlolovo - Izilinganiso zesilinganiso ziyindlela enhle yokukala nokuqhathanisa amasethi eziguquguqukayo. Uma ukhetha ukusebenzisa izikali zokulinganisa (isb. Kusuka ku-1 - 5) zigcine zingaguquguquki kulo lonke ucwaningo. Sebenzisa inani elifanayo lamaphoyinti esikalini bese uqinisekisa izincazelo zokuhlala okuphezulu nokuphansi okungaguquguquki kulo lonke ucwaningo. Futhi, sebenzisa inombolo eyinqaba esikalini sakho sokulinganisa ukwenza ukuhlaziywa kwedatha kube lula.
Ukuhleleka okunengqondo - Qiniseka ukuthi inhlolovo yakho igeleza ngokulandelana. Qala ngesingeniso esifushane esigqugquzela abenza inhlolovo ukuqedela inhlolovo (isb. “Sisize sithuthukise insizakalo yethu kuwe. Sicela uphendule inhlolovo emfushane elandelayo.”). Okulandelayo, kuwumqondo omuhle ukuqala emibuzweni ebanzi bese udlulela kuleyo emincane esikalini. Ekugcineni, qoqa imininingwane yabantu bese ubuza noma imiphi imibuzo ebucayi ekugcineni (ngaphandle kokuthi usebenzisa lolu lwazi ukuhlola abahlanganyeli bocwaningo).
Ngaphambi kokuhlola inhlolovo yakho - Qiniseka ukuthi uhlola kuqala inhlolovo yakho ngamalungu ambalwa ezilaleli zakho kanye / noma osebenza nabo ukuthola izingqinamba nokuhumusha okungalindelekile kwemibuzo.
Cabangela isikhathi sakho lapho uthumela izimemo zenhlolovo - Izibalo zakamuva zikhombisa ukuvuleka okuphezulu kakhulu nokuchofoza amanani kwenzeka ngoMsombuluko, ngoLwesihlanu nangeSonto. Ngaphezu kwalokho, ucwaningo lwethu lukhombisa ukuthi ikhwalithi yezimpendulo zezinhlolovo ayihlukile kusuku lwesonto kuye kwimpelasonto.
Thumela izikhumbuzi ze-imeyili yocwaningo - Yize kungafanelekile kuzo zonke izinhlolovo, ukuthumela izikhumbuzo kulabo abangakaze baphendule ngaphambilini kunganikeza umfutho omkhulu emazingeni okuphendula.
Cabanga ngokunikeza isikhuthazo- Ngokuya ngohlobo lwenhlolovo nezethameli zenhlolovo, ukunikeza isikhuthazo kuvame ukusebenza kahle kakhulu ekuthuthukiseni amazinga okuphendula. Abantu bathanda umqondo wokuthola okuthile ngesikhathi sabo. Ucwaningo lweZoomerang lukhombisile ukuthi izikhuthazi uqobo ukukhulisa amazinga okuphendula ngo-50% ngokwesilinganiso.
Ulungele ukuqala? Bhalisela i- khulula Zoomerang akhawunti eyisisekelo, sebenzisa izinyathelo ezingenhla, qalisa inhlolovo yakho bese ulungele ukuhlaziya imiphumela yakho ngesikhathi sangempela. Hlala ubukele okuthunyelwe okuzayo lapho ngizongena khona kuzici zocwaningo ezisezingeni eliphakeme kanye nezindlela ezintsha zokufaka izinhlolovo eziku-inthanethi kucebo lakho lebhizinisi jikelele. Ukuhlola Okujabulisayo!
Ingabe njengamanje usebenzisa izinhlolovo eziku-inthanethi zebhizinisi lakho? Ingabe uthole lezi zeluleko ziwusizo? Sicela ujoyine ingxoxo esigabeni sokuphawula ngezansi.
Nov 26, 2014 ngo-6: 22 AM
Siyabonga ngamathiphu amahle kangaka :)